वामदेव आफै ब्याक भएपछि रामवीर-वामदेव लफडा सकियो : प्रचण्ड !
काठमाडौँ- वामदेव गौतमलाई पुन निर्वाचन मार्फत संसदमा ल्याउने कुराले केहि दिन देखि नेपाली राजनीति तरंगित हुँदै आएको छ। धेरैले विरोध गरेपछि अहिले वामदेवको सांसद बन्ने सपना सपनामै सिमित हुने लगभग पक्का भएको छ।
शुक्रबार कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा आयोजित दशैं शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रामवीर र वामदेवको लफडा सकिएको बताएका छन्।
वामदेव आफैले चुनाव नलड्ने बताइसकेको हुँदा यस लफडाको अन्त्य भएको प्रचण्डले बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै,’अहिले रामवीरको राजीनामा र वामदेव चुनाव लड्ने कुरा आएको छ। यसमा तपाईंहरूले केही टेन्सन लिनुपर्दैन। पार्टीले निर्णय गर्छ,’ दाहालले भने, ‘हिजो वामदेवजीले चुनाव लड्दिनँ भनिसक्नु भयो अब यो लफडा सकियो। हामी अब देश विकासमा लाग्छौं।’
केहि दिन अगाडी मात्रै काठमाडौं-७ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामवीर मानन्धरले पदबाट राजीनामा दिन लागेको पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराएका थिए। साथै आफू वामदेवको लागिनै राजिनामा दिन लागेको पनि खुलासा गरेपछि नेपाली राजनीति तरंगित भएको थियो।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज २६, २०७५११:०३
काँग्रेसले संसदको लागि नयाँ रणनीति बनाउँन सिंहदरबारमा छलफल गर्दै !
डा. गोविन्द केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
वामदेव-वामदेव भन्दै हिडेका रामवीरको राजनीति करियरनै धरापमा !
सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्न प्रेरित गर्न सकोस्ः देउवा
अायाेगले बुझायाे राष्ट्रपति समक्ष राष्ट्रियसभाकाे परीणाम
प्रदेश नं. ६ ले राख्यो आफ्नो प्रदेशको नाम